Rev: Ukhutshelo lweVidiyo kunye neVidiyo, ukuGuqulela, ukuThwebula, kunye nokuThumela | Martech Zone
Kuba abathengi bethu banobuchwephesha obuphezulu, kuhlala kunzima ukuba sifumane ababhali bobabini bayile kwaye banolwazi. Ixesha elingaphezulu, sikhathele kukuphinda sibhale, njengababhali bethu, ke saye savavanya inkqubo entsha. Ngoku sinenkqubo yokuvelisa apho simisela khona ephathekayo istudiyo sepodcast kwindawo-okanye sibacofa ngaphakathi-kwaye sirekhoda iipodcast ezimbalwa. Sirekhoda udliwanondlebe kwividiyo. Emva koko sithumela iaudiyo kunye nevidiyo ngaphandle Ukukhutshelwa kunye nokufakwa kwamagama. Emva koko sinika ukhuphelo kubabhali bethu abadibanisa amanqaku angumxholo esiwapapashayo kwibhlog yabathengi okanye siwangenisa kwindawo yomzi-mveliso wesithathu.
Inkampani esiyisebenzisela oku yile IsAm, Kucetyiswa yinkampani yevidiyo emangalisayo esisebenza nayo, Qeqesha 918. Amaxabiso ayafikeleleka, ukujika kwezinto kuyamangalisa, kwaye ukufaneleka kokukhutshelwa kuyeyona nto iphambili. Njengoko sityhala abathengi bethu kwividiyo engakumbi nangakumbi, sikwafuna ukufaka iividiyo ngexesha langempela kuba amaqonga amaninzi aya kujonga ividiyo ngaphandle kokudlala iaudiyo. UMfu ubonelela ngale nkonzo ngokunjalo. UMfu unikezela ngezi nkonzo zilandelayo:
Ukukhutshelwa komsindo- Iqela labakhupheli abakhutshelweyo lithatha ukurekhodwa kweaudiyo yakho kwaye likhuphele kwi-99% ngokuchanekileyo. Ngenisa iifayile zakho kwiwebhu okanye Ukhuphelo lwe-App ye-iPhone, kwaye ufumane ingxelo epheleleyo ngokukhawuleza kwiiyure ezili-12. Ukukhutshelwa kwenziwa ngabantu, hayi isoftware yokwamkelwa kwentetho, ukuze babambe ngaphezulu kwe-nuance kunye nokuchaneka okuphezulu kunesoftware. UMfu unokuphatha phantse naluphi na uhlobo lwefomathi yeaudiyo (kubandakanya iMP3, AIF, M4A, VOB, AMR, kunye neWAV).
Ukukhutshelwa kweVidiyo- Iqela labakhupheli abakhutshelweyo lithatha ukurekhodwa kwevidiyo yakho kwaye liyikhuphele 99% yokuchaneka. Ngenisa iifayile zakho kwiwebhu, kwaye ufumane umbhalo opheleleyo ngokukhawuleza kwiiyure ezili-12. Abaqeqeshi bevidiyo ye-Rev bakhuphela ngesandla izinto ezibalulekileyo nezingathethiyo zevidiyo yakho kunye nokulungelelanisa amabinzana ukuya kumaxesha escreen. UMfu unokuphatha phantse naluphi na uhlobo lwefomathi yevidiyo (kubandakanya iMP4, WMV, M4A, MOV, AVI, VOB, AMR, WMA, OGG). UMfu naye unonxibelelwano neYouTube kunye neKaltura.
I-Capture yeVidiyo Zonke iifayile zeenkcazo zihambelana neCCC kunye neADA kwaye ziyahlangabezana neemfuno zeCandelo 508. Amagqabantshintshi athobela iApple, iAmazon, iNetflix, iHulu kunye neminye imigangatho. Abathengi banokukhetha phakathi kweefomathi ezininzi zeefayile (zonke ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo): I-SubRip (.srt), iScenarist (.scc), iMacCaption (.mcc), iTeked Text (.ttml), iTekisi ekhawulezileyo yeXesha (.qt.txt) , ITranscript (.txt), WebVTT (.vtt), DFXP (.dfxp), Cheetah .CAP (.cap), Ifayile yesihlokwana seSpruce (.stl), iFayile yeFayile yesihloko seAvd DS. IXML (.xml) kunye nezinye. Ngenisa ifayile yakho yevidiyo, ikhonkco kwividiyo yakho egciniweyo (iqonga levidiyo ekwi-Intanethi, i-FTP, iDropbox, njl.njl.), Okanye udibanise ne-API yazo. Uya kufumana ifayile yeenkcazo onokuyisebenzisa kwangoko, uyilayishe kwiqonga lakho olukhethiweyo kwi-Intanethi (umz bedlala, Wistia), okanye ulayishe kwisoftware yakho yokuhlela ividiyo (umz. I-Adobe Premiere Pro, iApple Final Cut Pro).
Imibhalo engezantsi eguqulelweyo- UMfu wenza iilwimi zemibhalo engezantsi kwiividiyo. Abaguquleli babo abaziingcali basebenzise iifayile ezivunyiweyo zabathengi kunye nevidiyo yakho ukwenza ifayile engezantsi kwiilwimi kunye neefomathi ezahlukeneyo. Ngokuzenzekelayo, iifayile zemibhalo engezantsi yesiqendu ikwayiCCC kunye neADA. Iilwimi zokuguqulela zibandakanya isiArabhu, isiBulgaria, isiCantonese, isiTshayina (esiqhelekileyo nesenziwe lula), isiCzech, isiDanish, isiDatshi, isiFarsi, isiFrentshi, isiGeorgia, isiJamani, isiGrike, isiHebhere, isiHindi, isiHungary, isiTaliyane, isi-Indonesia, isiJapan, isiJapan, isiKorea, isiNorway, isiPolish, IsiPhuthukezi (iBrazil), isiPhuthukezi (iPortugal), isiRomania, isiRashiya, iSlovak, iSpanish (iYurophu, iLatin America, i-American Hispanic), iSweden, iTagalog, isiThai. IsiTurkish, isiUkraine kunye neVietnam.
UMfu uhlala echaza iividiyo zokufunda kwi-Intanethi, uqeqesho, ezentengiso, izixhobo zentengiso, iifilimu, iifilimu ezizimeleyo, kwaye phantse naluphi na olunye uhlobo lokurekhodwa. Umfu angabhala amanqaku eentlanganiso, amaqela ekugxilwe kuwo, uphando lwentengiso, udliwanondlebe lwethisisi, idatha yolingo, iipodcast, ividiyo imifanekiso, kwaye phantse naluphi na olunye uhlobo lokurekhoda. Iingcaphuno zomsindo kunye nevidiyo zibiza i-1.00 yeedola ngomzuzu wevidiyo, zichanekile i-99%, kunye nokujika kweeyure ezingama-24, kunye nesiqinisekiso se-100%.
Zama uMfu namhlanje!
Ukwazisa: Sisebenzisa ikhonkco lokudlulisa kule posi kwaye siyavuzwa kubo bonke abathengi abatsha esizisa ngabo uMfu!
tags: I-AIFAmazonI-American Hispanic)AMRapileArabhuUkukhutshelwa komsindoInkonzo yokuTshintshela iAudioAVII-avs ds ifayile engezantsiBulgarianIsiCantonesecheetahIsiTshayina (ngokwesiko kunye nokwenza lula)CzechDanishdfxpDK New MediaDutchAmagqabantshintshi e-facebookfacebook isilungiso esilungeleyoisiFarsiIsiFrentshiGeorgianIsiJamaniIsiGrikeyesiHebhereHindihuluHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanilatin AmericaM4AUyileAVINamemp3MP4NetflixNorwegianI-OGGmenyezelisaIsiPutukezi (eBrazil)IsiPutukezi (Portugal)Isicatshulwa esinexesha elifutshaneisityhiIsiRomanianIsiRashiyaumbonisoSlovakIsiSpanish (saseYurophuIspruce ifayile engezantsiinkqutyanaSwedishTagalogIsiThai. IsiTurkishIxesha elibhaliweyoqeqesha i-918ngxeloUkrainianIingcaciso zeVidiyoividiyo engezantsiimixholo yevidiyoUkukhutshelwa kwevidiyoInkonzo yokuKhuphela iVidiyoVietnameseVOBWAVwebvttWMAI-WMVXML